काठमाडौं, २७ चैत । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुनको भाउ तोलामा ८ सय रुपैयाँले बढेर१ लाख ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि गत शुक्रबार छापावाल सुन तोलाको ९९ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । तेजावी सुनको भाउ तोलाको ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ । गत...
सुनको मुल्यमा गिरावट, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौँ, २१ चैत । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुनको भाउ तोलामा ६ सय रुपैयाँले घटेर ९८ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि, आइतबार सुन तोलाको ९९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सोमबार तेजावी सुनको भाउ तोलाको ९८ हजार २ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । आज चाँदीको भाउ पनि घटेको छ । आइतबार एक...
सुनको मूल्य स्थिर, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं, ४ चैत । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य स्थिर छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार प्रतितोला ९९ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको छापावाल सुनको भाउ शुक्रबार स्थिर रहेर सोही मूल्यमा कारोबार भैरहेको छ । तेजावी सुनको भाउ तोलाको ९९ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी चाँदीको मूल्य भने आज तोलामा ५ रुपैयाँको दरले घटेको छ । बिहिबार एक हजार ३९० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी...
काठमाडौं, १ चैत । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार प्रतितोला एक लाख २ हजार ३ सय रुपैयाँ कायम भएको छापावाल सुनको भाउ मंगलबार एक हजार ८ सय रुपैयाँले घटेर एक लाख ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । तेजावी सुनको भाउ तोलाको एक लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि आज तोलामा ३५ रुपैयाँको दरले घटेको छ । सोमबार...
काठमाडौं, २६ फागुन । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार प्रतितोला एक लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छापावाल सुनको भाउ बिहीबार ३ हजार ५ सयले घटेर एक लाख २ हजार रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । यसैगरी, तेजावी सुनको भाउ तोलाको एक लाख १ हजार ५ सय हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बुधबार सुनको भाउ इतिहासकै सबैभन्दा उच्च मूल्यमा...
काठमाडौँ, २३ फागुन । नेपाली बजारमा आज पनि सुनको भाउ बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार प्रतितोला एक लाख एक हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको भाउ सोमबार १ हजार १ सयले बढेर एक लाख ३ हजार रुपैयाँमा कायम भएको हो । तेजावी सुनको भाउ तोलाको एक लाख २ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघले जनाएको छ । यसैगरी आज चाँदीको मुल्य पनि प्रति तोलामा १० रुपैँयाको...
काठमाडौं, १३ फागुन । शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहीबार तोलामा ९९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य शुक्रबार ९८ हजार कायम भएको छ । बिहीबार सुन तोलामा २५ सय रूपैयाँले महंगिएको थियो । तेजावी सुनको मूल्य शुक्रबार प्रतितोला ९८ हजार ५ सय रुपैयाँबाट झरेर ९७ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला १३ सय ५५...
काठमाडौं, १२ फागुन । सुनको भाउ बिहिबार प्रतितोलामा २ हजार ५ सय रुपैयाँको दरले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बिहिबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९९ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । यसैगरी, बुधबार तेजावी सुनको भाउ तोलाको ९८ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । बिहिबार चाँदी प्रतितोलामा ३५ रुपैयाँले बढेर एक हजार ३५५ रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । ...
सुनको भाउ स्थिर, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं, २ फागुन । सुनको भाउ सोमबार स्थिर छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९५ हजार पाँच सय रुपैँया कायम भएको छ । आइतबार छापावाल सुन तोलाको ९५ हजार पाँच सय रुपैँयामै कारोबार भएको थियो । यसैगरी,सोमबार तेजावी सुनको भाउ तोलाको ९५ हजार निर्धारण भएको छ । आइतबार एक हजार ३००रुपैँयामा कारोबार भएको चाँदी सोमबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । ...
सुनको मुल्यमा वृद्धि, कति पुग्यो तोलामा ?
काठमाडौं, २७ माघ । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको प्रतितोला रु ५ सयले बढेर रु ९३ हजार ९०० पुगेको छ । पहेँलो धातु बुधबार प्रतितोला रु ९३ हजार ४०० मा कारोबार भएको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार तेजाबी सुनको आजको मूल्य प्रतितोला रु ९३ हजार ४०० छ । जसको मूल्य अघिल्लो दिन रु ९२ हजार ९०० थियो । यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा स्थिर...